“Qof walba wuxuu doonayaa inaan guuldareysano kulanka Manchester United” – Klopp – Gool FM
“Qof walba wuxuu doonayaa inaan guuldareysano kulanka Manchester United” – Klopp
(Liverpool) 19 Oct 2019. Macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa kahor kulanka ay booqan doonaan Axada barri ah garoonka Old Trafford wuxuu sheegay in cid kasta ay dooneyso in Manchester United ay guul gaarto kulanka barri.
Jürgen Klopp ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Liverpool Echo” wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood ee quseeya Reds, gaar ahaan kulanka soo aadan ay kooxda Manchester United kula ciyaari doonaan horyaalka Premier League.
Jürgen Klopp ayaa inta uu wareysigan ku gudi jiray wuxuu ka hadlay dhowr arrimood waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hoos u dhigista Manchester United ee dhanka saxaafada? Waxaan ka aqristay isla markaana kala socday saxaafada, laakiin waan filayaa waxyaabaha noocan oo kale ah”.
“Waan la yaabanahay farqigan iyo hoos u dhigistan, waxaan aaminsanahay gabi ahaanba 100% awooda kooxda Manchester United”.
“Waxay u muuqataa in qof walba uu doonayo inuu caawiyo Manchester United, qof walba oo wax qora ama qof walba oo sheegay hadalkan, wuxuu doonayaa guuldaradeena, wuxuuna dhiiragalinayaa Manchester”.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Crystal Palace Iyo Man City ee horyaalka Premier League